Ezekieri 34 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Uprofita pamusoro pevafudzi veIsraeri (1-10)
Jehovha anochengeta makwai ake (11-31)
“Mushumiri wangu Dhavhidhi” achaafudza (23)
“Sungano yerugare” (25)
34 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, profita pamusoro pevafudzi veIsraeri. Profita, uti kuvafudzi vacho, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Vane nhamo vafudzi veIsraeri+ avo vanongozadza matumbu avo chete! Vafudzi havafaniri kuenda nemakwai kumafuro here?+ 3 Munodya mafuta, uye munopfeka zvakagadzirwa nemvere dzemakwai, muchiuraya zvipfuwo zvakakora kupfuura zvimwe,+ asi musingafudzi makwai acho.+ 4 Hamuna kusimbisa gwai risina simba, hamuna kuporesa rinorwara, hamuna kumonera jira pane riya rakakuvara, hamuna kudzosa rakabva pane mamwe kana kutsvaga rakarasika;+ asi makaaitira utsinye muchiarwadzisa.+ 5 Saka akapararira nekuti akanga asina mufudzi;+ akapararira nenyika uye akadyiwa nezvikara zvesango. 6 Makwai angu aidzungaira mumakomo ese nemuzvikomo zvese zvakakwirira; makwai angu akapararira nenyika yese, pasina anoatsvaga kana anoona kuti ari kupi. 7 “‘“Saka inzwai shoko raJehovha imi vafudzi: 8 ‘“Neupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, “makwai angu zvaakava nyama yezvikara, achidyiwa nezvikara zvese zvesango, nekuti akanga asina mufudzi, uye vafudzi vangu zvavasina kutsvaga makwai angu, vachiramba vachingodya vega vasingafudzi makwai angu,”’ 9 inzwai shoko raJehovha imi vafudzi. 10 Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndiri kurwisa vafudzi vacho, uye ndichabvunza makwai angu kwavari, uye ndichaita kuti varege kufudza makwai angu,+ uye vafudzi vacho havazodyizve vega. Ndichanunura makwai angu pamiromo yavo, uye havazoadyi zvakare.’” 11 “‘Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri pano uye ndichatsvaga makwai angu ndega uye ndichaachengeta.+ 12 Ndichachengeta makwai angu semufudzi anofudza makwai ake anga akapararira.+ Ndichaanunura kubva kunzvimbo dzese dzaakapararira pazuva remakore nerima gobvu.+ 13 Ndichaatora pakati pemarudzi, ndoaunganidza kubva kunyika dzacho, ndoaendesa kunyika yawo uye ndichaafudza mumakomo eIsraeri,+ pedyo nehova uye pedyo nenzvimbo dzese dzekugara dzenyika yacho. 14 Ndichaafudzira mumafuro akanaka, uye achafura mumakomo marefu eIsraeri.+ Acharara imomo mumafuro akanaka,+ uye achafura mumafuro akasvibirira mumakomo eIsraeri.” 15 “‘“Ndichafudza makwai angu+ ndega, uye ndichaazorodza,”+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 16 “Ndichatsvaga rakarasika,+ ndichadzosa rakabva pane mamwe, ndichamonera jira pane rakakuvara, uye ndichasimbisa risina simba. Asi ndichaparadza akakora neakasimba ndoita kuti mutongo uve zvekudya zvawo.” 17 “‘Zvino imi makwai angu, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndava kuda kupa mutongo pakati pegwai negwai, uye pakati pemakondohwe nenhongo.+ 18 Zvamuri kuita zvekufura mumafuro akanakisisa zvishoma here? Mava kutowedzera pane izvozvo nekutsika-tsika mamwe mafuro enyu ese. Uye munoti kana mapedza kunwa mvura yakachena, munoitsika-tsika yosara yasviba. 19 Zvino makwai angu ndiwo anofanira kufura mumafuro akatsikwa-tsikwa netsoka dzenyu uye kunwa mvura yakasvibiswa netsoka dzenyu here?” 20 “‘Saka Changamire Ishe Jehovha ati kwavari: “Ndiri pano, uye ndichapa mutongo pakati pegwai rakakora negwai rakaonda, 21 nekuti makaramba muchiasundidzira nerutivi uye nebendekete uye makaramba muchitunga anorwara ese kusvikira apararira achienda kure. 22 Ndichaponesa makwai angu, haazodyiwi nezvikara;+ uye ndichapa mutongo wakarurama pakati pegwai negwai. 23 Ndichaapa mufudzi mumwe chete,+ iye mushumiri wangu Dhavhidhi,+ uyo achaafudza. Achaaendesa kumafuro, uye achava mufudzi wawo.+ 24 Uye ini Jehovha ndichava Mwari wavo,+ uye mushumiri wangu Dhavhidhi achava jinda pakati pavo.+ Ini, Jehovha, ndataura. 25 “‘“Ndichaita sungano yerugare navo,+ uye ndichabvisa zvikara zvinotyisa munyika yacho,+ kuti vagare murenje vasina chekutya uye varare mumasango.+ 26 Ndichaita kuti vave chikomborero,+ ivo nenzvimbo yakapoteredza chikomo changu, uye ndichaita kuti mvura inaye panguva yayo. Makomborero achanaya semvura.+ 27 Miti yesango ichabereka, uye ivhu richabereka zvibereko zvaro,+ uye vachagara munyika yacho vasina chekutya. Vachaziva kuti ndini Jehovha pandichatyora majoko+ avo ndovanunura mumaoko evaya vaivaita varanda. 28 Havazooneswi nhamo nemarudzi kana kudyiwa nezvikara zvepanyika, uye vachagara zvakanaka, pasina anovatyisa.+ 29 “‘“Ndichavadyarira munda wezvirimwa une mbiri, uye havazofizve nenzara munyika yacho,+ uye havazonyadziswizve nemarudzi.+ 30 ‘VaIsraeri vachabva vaziva kuti ini Jehovha Mwari wavo ndinavo, uye kuti ivo vanhu vangu,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”’ 31 “‘Zvino imi makwai angu,+ makwai andinochengeta, munongova vanhu uye ini ndini Mwari wenyu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”